Mudaaharaadkii ugu balaarnaa ee ay Soomaaliyi kasoo qaybgasho loogana soo horjeedo filimkii laga sameeyey Nabigeena (NNKH) oo lagu qabtay magaalada Gothenburg
Gothenburg Isniin 24 September 2012 SMC
(Gothenburg) 24 Sept 2012 Mudaaharaadkii ugu ballaarnaa ee ka dhaca Scandinavia marka laga hadlayo dibad baxyada lagu diidan yahay aflagaadadii aan laa’iqa ahayn ee lagula kacay nabigeenna suuban nnkh ayaa ku qabsoomay magaaladan Gothenburg, caasimadda 2-aad ee dalkan Sweden.
Dibad baxan oo ay soo qabanqaabiyeen qaar ka tirsan ururada muslimku leeyahay ee magaalada ka jira ayaa waxaa kasoo xaadiray shucuubta islaamka ah ee dalkan Sweden oo ay Soomaaliduna door lixaad leh ku leedahay.
Mudaaharaadka ayaa kasoo bilaabmay waddo caan ah oo ku taalla bartamaha magaalada Gothenburg taasoo lagu magacaabo Gotaplatsen wuxuuna mudaaharaadka oo ahaa mid nabadeed oo aan gacan ka hadal iyo rabsho lahayn uu deeto qaaday jidka dheer ee bartamaha magaalada ilaa uu ka tegey isgoyska Prunsparken oo baalka ku haya saldhiga basaska iyo tareenada laga raaco ee ugu wayn Gothenburg halkaasoo laga jeediyay khudbado kala duwan.
Dadka dibad baxayay ayaa ku qaylinayay ‘Ilaah baa wayn’, ‘Islaamku waa nabad’, ‘halla xushmeeyo caqiidooyinka dadka kale,’ ‘joojiya caburinta iyo caayda islaamka’ IWM, waxaana cajiib ahayd inay xitaa salaadii casirka ay ku dukadeen bartamaha magaalada Gothenburg.
Filimkan meel ka dhaca ah oo loogu magac daray ’’The inocense of muslims’’ ama ‘’eed la’aanta muslimiinta’’ ayaa waxaa sameeyey nin ka tirsan qibdiyiinta Maraykanka oo asal ahaan Masri ah oo lagu magacaabo Nakoula Basseley Nakoula balse ku raad gadanayay ama ku saan tiranayay magac beenaadka Sam Bacile.
Balse jeer ay doodu joogtey filmkan oo ay aad uga caroodeen muslimiintu kaasoo sababay dhimasha dad badan oo uu ka mid yahay danjirihii Maraykanka u fadhiyi jirey Libya Chris Stevens ayaa waxaa misna sawir kale soo sameeyey warside faransiis ah oo lagu magacaabo Charlie Hebdo.
Tifaftiraha guud ee wargayska Gerard Biard ayaa si jees jees ah u yiri hadal aabi ka muuqdo: Xigasho ‘’Waxaanu nahay wargaysyo ixtiraama sharciga Faransiiska, lkn hadii uu jiro sharci kale oo lagaga dhaqmo Kaabuul iyo Riyaad isku dhibi mayno inaan ixtiraamno’’.
Dowladda Faransiiska ayaa lafteedu tiiyoo ay aad u cambaaraysay sawirkan oo ay mas’uuliyad darro ku tilmaantay maadaama lagu beegay xilli ay xasarado kacsan yihiin waxay misna ku andocootey inay gacmeheed xiran yihiin oo aysan arintan wax badan ka qaban karin maadaama uu waafaqsan yahay sida ay tiri xeerka xoriyatul qowlka.
Hadaba Sheekh Fu’aad oo ah aqoonyahan arimahaas u dhuun daloola ha inoo iftiimiyo hadii ay jirto laba wejiilleeyn ku jirta xoriyadda hadalka laftiisa oo ay dadka qaar u arkaan wax marna la joojiyo marna la jiifiyo.
Sheekh Fu’aad Bin Caqiil oo ka mid ah macalimiinta Soomaaliya ayaa tilmaamay in xoriyadda hadalka lafteeda dib u eegis lagu sameeyo maadaama buu yiri ay laba wajiilanimo ka muuqato oo aan waxyaabaha qaarkood laga hadli karin ama la sameeyn karin laakiin caadi laga dhigayo in la aflagaadeeyo diinta Islaamka iyo nabigeena Muxamed (NNKH).
Dibad baxyada iyo cabashooyinka ay muslimiintu arintan ka sameeynayaan ayaa la saadaalinayaa inay sii socon doonaan iyadoo ay xitaa jiraan mubaadaro ku aadan in maanta oo isniin ah iyo talaadada berri ah la qaadoco adeegsiga bogga muuqaallada lasoo geliyo ee Youtube iyo Google oo isna ah matoorka ugu wayn aduunka ee wax looga baaro internet-ka kuwaasoo diidey inay film-kan ka saaraan Internet-ka.